Petition · U codeey Aayaha Umadaadda... Diid Qabiil wax ku qaybsiga · Change.org
U codeey Aayaha Umadaadda... Diid Qabiil wax ku qaybsiga
SOMALI NON STATE ACTORS SONSA started this petition to Baarlamaanka Federalka Somalia (Labada Aqal), Xukuumadda JFS, Hay'adaha Garsoorka iyo Beesha Calamka
AFTI QORAAL EE DADWEYNE
Afti Dadweyne ee looga hortagaya ansaxinta Hindise Sharciyeedka Doorashada ee Sharciyeynaysa in nidaam Qabiil ku saleysan la Isku Doorto
Aftidaan Dadweyne ayaa waxaa soo bandhigay qayb ka mid ah Urrurada Bulshada Rayidka Soomaaliyeed iyagoo ku dhirragelinaaya bulshada Soomaaliyeed in ay ka hortagaan Hindise Sharciyeedka Doorashada ee dhawaan ansixiyeen Golaha Shacabka ee haatan horyalla Aqalka Sare. Haddi Aqalka Sare ansixiyo sharcigaan, waxaa uu sharciyeyn donaa in nidaamka 4.5 doorashada dalka ku saleynaato.
Aftidaan dadweyne waxaa saldhig u ah doodeeda in Hindise Sharciyeedka Doorashada (HSD) Dalka ay xoojinaysaa kala qeybinta qabiillada iyo iska horkeenidda dadka Soomaaliyeed. HSD waxuu xoojinayaa nidaamka doorashada ee musharaxiinta lagu soo xulo habraac ku dhisan qabiil. Aftidaan dadweyne waxay kaloo dalbaysaa in muwaadiniintu ku soo doortaan wakiiladooda nidaamka doorashada ee ku dhisan metelaada isku dheelitiran (Proportional Representation PR).
Sida oo kale, aftidaan dadweyne waxay caddeyneysaa in dadka Soomaaliyeed ay mudda dheer soo tijaabiyeen dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yahiin gobanimo u diriir, diidmo kali talisnimo iyo dagaallo sokeeye oo lagu hoobtay ma xamili karaan in hadda loo sharciyeeyo Sharci Doorasho oo qabiil ku saleysan.
Sidaas darteed, aftidaan dadweyne waxay tageeraysaa nidaam doorasho ee ku dhisan xisbiyo ee aan ahayn nidaamka doorasho ee Hindese Sharciyeedka Doorashada ku qoran ay ansaxiyeen Golaha Shacabka kaas oo xoojinaayo qabiil, kala qaysanaan ee cadaawad dhex dhigo karo dadka Soomaaliyeed. Hindise Sharciyeedka Doorashada waa mid aanan suurtogal ka dhigeyn in doorashooyin dalka ka dhacaan marka loo eego dhinaca amniga, waqtiga harsan iyo awooda fulineyd sidaas darted haddii la qaato waa mid keeni kara in waqtiga doorashada dib loo dhigo taas oo kalsoonida bulshada dhumin doonta haddii ay dhacdo. Sidoo kale Hindise Sharciyeedka ma siin doono fursad tirada haweenka ee baarlamaanka looga baahan yahay.
Waa xaq dastuuri ee muwaadin kasta ee Soomaaliyeed leeyahay in uu ka hor imaan karo ama diidi karo sharuucda dalka sida waafaqsan faqradda 3aad ee qodobka 132aad ee dastuurka ku meel gaarka dalka. Aftidaan dadweyne waxaa loola jedaa in lagu arruriyo 40,000 oo saxiix dadweyne oo lagu dalbanaayo dib u eegis in lagu sameeyo Sharciga Doorashada Qaranka ee hadda horyaalo aqalka sare. Sida oo kale aftidaan dadweyne waxaa lagu dalbanayaa nidaamka doorashdada ee ku dhisan metelaada isku dheelitiran (PR). Nidamkaas oo siinaya muwaadin kasta xaqa u codeynta cidda ay doonayaan ee ku dhisan qof iyo cod.
Aftidan waxaa soo abaabuey ururada bulshada rayidka ee halkan ku saxiixan
Banadir Women Teacher Association
Coalition of Grassroot Women Organization (COGWO)
Peace and Human Right Network
Somali Coalition of Freedom Expression
Network for Somali NGO
Somali Association Formal Education (SAFE)
Bakol Women Empowerment
Somali Industrial Manufacturer